के ‘प्रेम गीत ३’ मा प्रदिपसँग देखिलिन त निति शाह ? – Rastriyapatrika
के ‘प्रेम गीत ३’ मा प्रदिपसँग देखिलिन त निति शाह ?
काठमाडौँ, मिस नेपालकी सेकेन्ड रनरअप नीति शाह प्रेम गीत ३ मा देखिने सम्भावना रहेको छ। सुन्दरताकै कारण उनि सबैको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल भएकी थिइन् । २०१७ मा मिस इन्टरनेशनलको ताज पहिरिन सफल नीति चलचित्र प्रेम गीतको तेस्रो सिरिज प्रेम गीत ३ मा देखिने लगभग पक्का भएको छ ।
नीति चलचित्रमा नदेखिए पनि विभिन्न टेलिभिजन तथा म्यागजिनका विज्ञापनमा छाईरहेकी छिन। नायक प्रदिप खडकाको चलचित्र लभ स्टेशन हेर्न पुगेकी नीतिले आफुलाई प्रेम गीत ३ बाट चलचित्रमा काम गर्ने अफर आएको खुलासा गरेकी हुन् ।
प्रदिपले पनि नीति जस्तो नायिका चलचित्र क्षेत्रका लागि आवश्यक रहेको बताए । प्रेम गीत ३ मा नीति र प्रदीपको जोडीलाई देखिने हल्लाले चलचित्र प्रेमी दर्शकहरु थप उत्साहित भएका छन । डिस होमको विज्ञापनमा यी दुईको केमेष्ट्री निकै रुचाइएको कारण चलचित्रमा पनि यी दुइको केमेष्ट्री दर्शकले मन पराउने अपेक्षा गरिएको छ ।